यी मेहनती नारीहरु : जो आफ्नै पौरखमा अर्बपति भए, र सिकाए सफलताको कथा ! ~ Banking Khabar
यी मेहनती नारीहरु : जो आफ्नै पौरखमा अर्बपति भए, र सिकाए सफलताको कथा !
बैंकिङ खबर । बिजनेसको दुनियामा आज महिलाको पनि उत्तिकै ठुलो सहभागिता छ । विश्वमा त्यस्ता धेरै महिला छन् जसले ठूलो व्यवसाय निर्माण गरेका छन् ।
यी महिलाहरू अरबौं खरबौका मालिक भएर रहेका छन् । यसका साथै उनीहरू सौन्दर्यको हिसाबले पनि कुनै सेलिब्रटी भन्दा कम छैनन् । यी महिलाहरू मध्ये धेरै त्यस्ता छन् जसले आफ्नो पारिवारिक व्यवसाय सम्हालेका छन् र एक सफल महिला उद्यमी भएका छन् ।
केही महिलाहरूले आफ्नै मेहनतको साथ व्यवसायको दुनियामा आफ्नो छुट्टै स्थान बनाएका छन् । यीमध्ये केही महिलाहरू ठूला राजनीतिज्ञका परीवारका पनि छन् भने केहि ठूला उद्यमीका पत्नीहरू पनि छन् । यसमा केहि त्यस्ता महिलाहरू समावेश छन् जसले बुढो भए पनि आफ्नो जागिर छोडेनन् र सफलताको उचाइमा पुगे ।
यहाँ केही सफल व्यवसायी महिलाहरूको बारेमा उल्लेख गरीएको छ जसले सफलताको एक ज्वलन्त उदाहरण बनाए । यी अरबपति महिलाहरूको जीवनशैली पनि ग्ल्यामरस छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावमा डोनाल्ड ट्रम्पले पराजय भोग्नु परेको छ । डोनाल्ड ट्रम्प एक अनुभवी राजनीतिज्ञका साथै एक ठूला र सफल व्यापारी हुन् । उनको व्यवसाय संसारभर फैलिएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पकी छोरी इवान्का ट्रम्पले उनको परिवारको व्यवसाय सम्हाल्छिन् ।
उनको नाम संसारको ठुलो बिजनेस वुमन्समा समावेश छ । डोनाल्ड ट्रम्पसँग यति धेरै सम्पत्ति छ कि उनकी छोरी इवान्का ट्रम्पले केहि गर्न आवश्यक थिएन । तर उनी आफैंमा एक सफल बिजनेस वुमन बनिन् । उनी आफ्नो बुबा डोनाल्ड ट्रम्पको धेरै व्यवसाय हेर्छिन् । यसका साथै, इवान्का अमेरिकी टिभी च्यानलहरूमा पनि देखा पर्छिन् । इवान्का ट्रम्पले केहि पुस्तकहरू पनि लेखेकि छिन् ।